Welcome to the Majoi Post News
လိုင်ဇာ အက်ဖ်အမ် အသံလွှင့်အစီအစဉ် စတင်
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အရေအတွက် ထိုးတက်
ကောန်ဆန်ကျေးရွာသားများအား ဗမာစစ်တပ်နှိပ်စက် လုယက်
ဂျယ်ယန့် စစ်ပြေးရှောင် စခန်းတွင် အလယ်တန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ
MYITKYINA NJANG KAWNG MAWDAW DARU MAKAU HTA BAWM KAPAW
KIA troops from KIA military base (10) detonated Burmese military convoy trucks
A fierce battle launches at Uthang Yang, Ja Pu under KIA Brigade (5) control area
KIA Masat (2) Dap Ba ginra hta gasat poi byin.
လိုင်ဇာ အက်ဖ်အမ် အသံလွှင့်အစီအစဉ် စတင်	Written by Administrator	Saturday, 22 September 2012 19:31	၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်
ကချင်ပြည် လိုင်ဇာဒေသတွင် လိုင်ဇာ ရေဒီယို အသံလွှင့် အစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အသံလွှင့်ခြင်း အစီအစဉ်ကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ကချင်ပြည်တွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းသူပြည်သားများအတွက် သတင်းများ၊ သီချင်းများနှင့် အကျိုးရှိသည့် အစီအစဉ်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ တင်ဆက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မဂျွယ်ပို့စ်သတင်းထောက်မှ လိုင်ဇာ ရေဒီယို တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနေပြီး ဆက်သွယ်ရရှိပါက အဆိုပါ အင်တာဗျူးကို အမြန်ဆုံး ဖော်ပြပေးပါမည်။
Last Updated on Saturday, 22 September 2012 19:33	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖျက်ဆီးသူများပြုလုပ်မည့် ထိန်းသိမ်းရေးဟောပြောပွဲ	Written by Administrator	Wednesday, 12 September 2012 05:36	၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်
မြစ်ကြီးနားတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲတစ်ရပ်ကို လာမည့် စက်တင်ဘာလ ၁၄-၁၅ ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်သွားမည့်အကြောင်း မီဒီယာများတွင် ဖတ်ရှုရပါသည်။ အဆိုပါ ဟောပြောပွဲများသည် အလွန်အကျိုးရှိသည့် ဟောပြောပွဲများဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ဟောပြောပွဲကိုဦးဆောင် ပြုလုပ်မည့်သူများမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကို အလွန်အမင်း ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် သူများဖြစ်နေသည့် အတွက် စိတ်ထဲတွင် ဘ၀င်မကျပါ။
ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်မှာ မလိခမြစ် အထက်ပိုင်းတွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးဟောာင်း လခရိ လအောင်နှင့် အတူ ရွှေမှော် အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်နေသည်။
တိကျသေချာသည့် အချက်အလက်မဟုတ်သော်လည်း ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု ယူဆရသော ဦးခမိုင်တန် (Sea Sun Star Company) ပိုင်ရှင်၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဂျာခေါန်တို့ လင်မယားမှာ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ရွှေ တူးဖော်ထုပ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ထိုသို့သော ကိုယ်ကျိုးချမ်းသာကြည့် သဘာဝဖျက်ဆီးရေး၊ မိမိ မိသားစု သာယာဝပြောရေးကို ဦးထိပ်ထားသည့် လူတစ်စုမှ ယခုကဲ့သို့ ဟောပြောပွဲပြုလုပ်သည်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ခံ လူငယ်များမှ မနှစ်မြို့ကြပါ။
သို့သော်လည်း စီတာပူ (ရှတာပရူ) ရပ်ကွက်သားများမှ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်၏ လုပ်ဆောင်မှုအား ထောက်ခံကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်သည် ရွှေတူးဖော်သည့် ဒေသများမှ လူထုအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှုများ၊ ပညာပေး အစီအစဉ်များ ရံဖန်ရံခါ ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင် ကချင်လူမျိုးများလေးစားသည့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ သမီးကြီး ဖြစ်သည်။
ယခုလို သင်တန်းများပြုလုပ်ခြင်း ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်းများက အလွန်အကျိုးရှိမည်ဟု မြင်သည်။ ထို့အတူ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝသံယံဇာတများ မတန်တဆ ထုတ်လုပ်နေခြင်းကို လျော့ချပေးနိုင်ရန်အတွက် ကေအိုင်အိုအား တောင်းဆိုလိုပါသည်။
ကချင်နိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးစေခြင်းအတွက် ကချင်တိုင်းတွင် အလွန်အမင်းတာဝန်ရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ မိမိ နိုင်ငံ မိမိ နယ်မြေဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့်ပါ။
တဆက်တည်းမှာပဲ ကေအိုင်အိုအနေဖြင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူ (ရှတာပရူ) အတွင်းတွင် အလွန်အမင်း ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပွားနေသည့် ဘိန်းဖြူရောင်းဝယ်နေကျခြင်းကို တားဆီးပေးပါ။ ဗမာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ထောက်လှမ်းရေး စရဖ များအားလုံးပူးပေါင်းကာ ဘိန်းဖြူရောင်းစားနေကြပါသည်။
ကချင် ကျောင်းသားစီတာပူ (ခဏ)
မှတ်ချက်။ ပေးစာ မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်အား ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရာ မရပါ။ ဦးခမိုင်တန်၏ ဇနီး ဒေါ်ဂျာခေါန်ထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်သော်လည်း မရှိကြောင်းသာ ဖြေကြားပါသည်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အရေအတွက် ထိုးတက်	Written by Administrator	Tuesday, 04 September 2012 06:24	၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်
ဗမာအစိုးရစစ်တပ်၏ နယ်ချဲ့ စစ်ဆင်ရေးများအဆက်မပြတ် တိုးချဲ့လာခြင်းကြောင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မန်တုန်မြို့နယ်၊ နမ့်(မ)တူမြို့နယ်များတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အလွန်များလာကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ကြူကုတ် (ပန်ဆိုင်း)၊ နမ့်ဖတ်ကာ၊ မန်တုန် နှင့် နမ့်(မ)တူ မြို့များတွင် အများဆုံး ခိုလှုံနေကြရပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများတွင် နေထိုင်ကြရသည်။
အဆိုပါမြို့နယ်များတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ စုစုပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့်အထိ ရောက်ရှိခိုလှုံနေကြသည်။ မိမိဇာတိနှင့် ဝေးကွာခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း နှင့် အခက်အခဲများကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ အကျိူးဆက်များမှာ ဆိုးဝါးလာနေကြောင်းသိရသည်။
လူကုန်ကူးခံရခြင်း၊ မိဘကိုယ်တိုင် ပါဝင် လူကုန်ကူးခြင်း၊ သမီးမိန်းကလေးများအား အိမ်ထောင်ချပေးခြင်း၊ အရက်သေစာ သောက်စားမှုများလာ ခြင်းတို့သည် ကျွဲကူးရေပါ စစ်၏ အကျိုးဆက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်အများစုမှာ ပညာသင်ယူရန်ခက်ခဲမှုများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့် အနာဂါတ်ကာလတွင် ကွာဟချက်များလာမည့် မျိုးဆက်များဖြစ်လာရန် အလွန်နီးစပ်နေသည်။
စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အများစုမှာ ကချင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး တအောင်း(ပလောင်)နှင့် ရှမ်း များလည်း ရပ်ရွာစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရသည်။
ဂျယ်ယန့် စစ်ပြေးရှောင် စခန်းတွင် အလယ်တန်းကျောင်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ	Written by Administrator	Saturday, 04 August 2012 06:22	၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်
ကချင်ပြည်၊ လိုင်ဇာမြို့အနီးရှိ ဂျယ်ယန့် စစ်ပြေးရှောင်စခန်းတွင် စစ်ကာလအတွင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် အလယ်တန်းအဆင့် စာသင်ကျောင်းကို ယနေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် အနုမောဒနာ ဆုတောင်း အခမ်းအနားဖြင့် ဖွင့်လှစ်သည်။
ကချင်အစိုးရနှင့် စစ်ပြေးရှောင် ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလှူရှင်များ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
လက်ရှိအချိန် ဂျယ်ယန့် စစ်ပြေးရှောင် စခန်းတွင် အလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၁၅၀၀ ဦးခန့်ရှိပြီး ဆရာ/ဆရာမ ၃၇ ဦးဖြင့် ပညာရေး အဆက်မပြတ်စေရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ကချင်အစိုးရ မှ ခန့်အပ်ထားသည့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများအပြင် လုပ်အားပေး ဆရာ/ဆရာမ များလည်း ပညာသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။
ကျောင်းအဆောက်အဦကို သွပ်မိုး၊ သံတိုင် ယက်မများဖြင့် တည်ဆောက်ထားကာ ခိုင်ခန့်မှု ရှိပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အမိုးအကာဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ပညာသင်ယူနိုင်တော့မည် ဖြစ်သဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသူများ အားလုံးကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျောင်းသူ တစ်ဦး၏ မိခင်ဖြစ်သူက မျက်ရည်လည်နေသော မျက်ဝန်းများဖြင့် ပြောပြသည်။
ကချင်အစိုးရနှင့် နယ်ချဲ့ဗမာအစိုးရကြား စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်နေပြီး၊ အမိုးအကာမရှိ၊ မြေကြီးပေါ်တွင် ခက်ခဲစွာ ပညာသင်ကြားနေသည့် ကချင်ကလေးငယ်များ အမြောက်အမြားရှိနေသည်။ စစ်ပြေးရှောင်သူ ရှစ်သောင်းကျော်တွင် ငါးသောင်းကျော်မှာ ကချင်အစိုးရ ထိန်းချုပ်ရာဒေသများတွင် ခိုလှုံလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အရွယ်မရောက်သေးသူ ဦးရေးသီးသန့် နှစ်သောင်းကျော်ဖြစ်ပြီး ရ၈% မှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများဖြစ်သည်ဟု စစ်ပြေးရှောင် ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန်ထားသော စာရင်းများအရ သိရသည်။
အနာဂတ်တွင် ဆက်လက်ရှင်သန်သွားမည့် ကလေးငယ်ချင်း အတူတူ ကလေးငယ်အများစုမှာ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ပညာသင်ယူနိုင်နေချိန်တွင် ကချင်ကလေးငယ်များအတွက်တွင်မူ စိန်ခေါ်ချက်များစွာ စောင့်ကြိုနေသည်။
Last Updated on Saturday, 04 August 2012 06:23	ကောန်ဆန်ကျေးရွာသားများအား ဗမာစစ်တပ်နှိပ်စက် လုယက်	Written by Administrator	Monday, 03 September 2012 07:26	၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ မုန်ဂို (Munggu) ဒေသရှိ ကောန်ဆန် (Kawn Sam) ကျေးရွာသားများအား ဗမာစစ်တပ်မှ နှိပ်စက်သည့် အပြင် ရွာသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား လုယက် ယူငင်ကြကြောင်းသိရသည်။ တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့ စုံစမ်းဆဲ အဆိုပါ ဗမာစစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီး အဆင့်ရှိသူမှ မင်းကိုကောင်တွေအားလုံး ကေအိုင်အေ (KIA) လူတွေပဲ။ မင်းတို့ ကေအိုင်အေ (KIA) ကို အောက်တိုဘာလ မတိုင်ခင် အပြုတ်တိုက်ပစ်မယ် ဟု ကြိမ်းဝါးသွားသည်။
ထို့အပြင် မသင်္ကာသူများအား ပါးရိုက်ခြင်း၊ ဆောင့်ကန်ခြင်းများကို လူမဆန်စွာ ပြုမူသွားခဲ့သည်။
ဒေသခံများအကြား ကြောက်ရွံ့မှုကြီးထွားလာပြီး ပန်ဆိုင်း (Pang Sai) မြို့ပေါ်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများ များ သထက်များလာပါသည်။ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့သည် တရုတ်ပြည် လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကြောင့် တရုတ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ မတိုင်မှီ ကေအိုင်အေ (KIA) အား အပြတ်ရှင်းနိုင်ရန် ဗမာစစ်တပ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ အပူတပြင်း ကြိုးပမ်းနေသည်ဟု ဒေသခံများအကြား ပြောဆိုနေကြပါသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၏ တပ်မတော် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) နှင့် နယ်ချဲ့ဗမာစစ်တပ်အကြား တိုက်ပွဲများသည် ကချင်နိုင်ငံ အနှံ့ဖြစ်ပွားနေပြီး သြဂုတ်လ ကုန်ပိုင်းတွင် အဖိုးတန်ကျောက်စိမ်းများထွက်ရှိရာ ဖါးကန့်ဒေသတွင်လည်း စစ်မီး ကူးစက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
လိုင်ဇာတွင် တကျော့ပြန် စစ်ပွဲ တစ်နှစ်ပြည့် ဆုတောင်းပွဲများ ပြုလုပ်	Written by Administrator	Saturday, 09 June 2012 08:13	၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့
ကချင်ပြည်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော တကျော့ပြန် စစ်ပွဲ တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်း ဆုတောင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို လိုင်ဇာမြို့တွင် ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဒုကသည် စခန်းများတွင်လည်း အသီးသီး ဆုတောင်းစည်းဝေးပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နံနက် ၇ နာရီတွင် ကချင်ပြည် အစိုးရ အမှုထမ်း အရာထမ်းများ၊ စစ်မှုထမ်းများ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ဆုတောင်းကြသည်။
နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ပြီး အထူးတလည် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ဆုတောင်းကြကြောင်းသိရသည်။ စစ်မက်ပြန်လည် ဖြစ်ပွားပြီး စိတ်အားငယ် ဆုံးရှုံးမှုများရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် သက်သက်ဖြင့် ငတ်မွတ်ခြင်းနှင့် ခက်ခဲခြင်းများကို ကျော်လွှားနိုင်သဖြင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မိမိတို့ ကချင်ပြည်သူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသော ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်များမှ အသက်စတေးခံ ရင်ကို ကတုပ်လုပ်ပြီး နေပူပူ မိုးရွာရွာ ရန်သူ နယ်ချဲ့ ဗမာစစ်တပ်အား ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေသော ကချင်စစ်သည်များအတွက် ထာဝရဘုရားသခင်ထံ စိတ်နှလုံး နှိမ့်ချစွာ ဆုတောင်းခံခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် စစ်ရေး နိုင်ငံရေးအားဖြင့် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေသည့် ကချင်အစိုးရခေါင်းဆောင်များအတွက်လည်း ကောင်းမွန်စွာ ဦးဆောင်နိုင်ပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အား၊ ညာဏ်ပညာခွန်အား၊ ၀ိဥာည်ခွန်အားများရရှိစေရန် ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။
စစ်ဘေးဒဏ်သင့်ပြည်သူလူထုအတွက်လည်း ခံနိုင်ရည် စွမ်းအားများပေးသနားတော်မူပါရန် တောင်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်။
လူသူလက်နက်အင်အား အဆမတန်ကွာခြားသော်လည်း ကချင်ပြည်သူများ၊ ကချင်စစ်သည်များသည် မိမိတို့နိုင်ငံ တနည်းအားဖြင့် မိမိတို့အိမ်ကို ကာကွယ်နေသူများဖြစ်သည်။ ကချင်စစ်သည်များသည် ဗမာဒေသများသို့ သွားရောက် တိုက်ခိုက် လုယက် ဖျက်ဆီး မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းများ လုံးဝ မရှိပါ။ တရားမျှတသော ခုခံစစ် အောင်မြင်ပြီး ကချင်ပြည်သူများ အောင်ပွဲရနိုင်ရန် ဆုတောင်းခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆုတောင်းခဲ့သူ ကိုဂွမ်ဆန်အောင် က တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဖြေကြားခဲ့သည်။
Last Updated on Saturday, 09 June 2012 08:14	More Articles...
စစ်ဘေးဒဏ်သင့် တကသိုလ်ကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်ရန် ခက်ခဲနေ
KIA သို့ တပ်သားသစ်များတိုးမြှင့်ဝင်ရောက်
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေးဒဏ်ခံ ကျောင်းသားများ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရန် ခက်ခဲ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း (Kachin Sub-state) ရှိ ကျောင်းသားများ အခက်တွေ့နေ
«StartPrev12345678910NextEnd»	Page 1 of 13	Copyright © 2013 majoipost.com. All Rights Reserved.